AOXJET yave kuita yemagetsi propulsion enyika kubvira 2015. Pakutanga isu akavapa yemagetsi propulsion enyika kuti mavanga siyana achida kusika mvura yavo mitambo zvigadzirwa. Izvi zvakapa kuti vazhinji ruzivo mumunda tisati tasarudza Brand edu mvura mitambo zvigadzirwa. Takakwanisa kutora zvose tadzidza uye uise zvinhu zvedu kumiririra zvakanaka kukosha kuti vaita.
Our zvakadzika midzi samambure mumvura yemitambo indasitiri uyewo tikwanise nguva dzose kuva wokutanga chaizvo ruoko ruzivo chero zvigadzirwa zvitsva uye kuitika itsva. Sezvo aitungamirira makirisito propulsion nokutengesa, tine pedyo chaizvo pamwe ukama zhinji dzimwe mvura mitambo zvigadzirwa vanogadzira Zvinokosha kutenga zvigadzirwa zvavo panguva yakaderera zvichibvira mutengo. Ose zvigadzirwa isu akanyorwa Website, vari kana manyawi zvinoberekwa AOXJET kana zvinoberekwa vadiwa vedu sokuronga vakasarudzwa, nekugoverana nevakawanda unokosha chinangwa rakasikwa hwakanakisisa uye bheji ukoshi mvura mitambo zvigadzirwa.
All zvinogadzirwa AOXJET vari kana akaita mumba kubudikidza AOXJET, kana akaita neDare pamwe ishamwari vari kushandisa AOXJET kuti propulsion enyika. Izvi zvinotipa kwete chete yakanakisisa mutengo zvazvakanakira, asiwo yakanakisisa kuti kukoshesa uye flexibilities.
Mumakore edu kutsvakurudza uye kukura, uye rokuedza zvigadzirwa siyana, redu propulsion hurongwa ndezvimwe zvezvisarudzo zvakavimbika hurongwa munyika. Kunyanya edu akagadzirirwa ESC, yakabudirira kuuya pasi vainyeperwa mwero kuva pasi 0.5%, izvo zviri zvikuru yakaderera mvura mutambo dzemagetsi zvigadzirwa.
Customizable Board Rakaumbwa / Brand
Pamusana edu kare zvakaitika mu-imba kugadzira mvura mitambo zvigadzirwa uyewo pamwe siyana nemamwe makambani midziyo mvura, takaita yedu propulsion gadziriro kuti kwazvo revatema uye raigona nyore yakanyatsoiswa pana zvakasiyana bhodhi zvitarisiko. With muukama yedu yapera romugove cheni kubva maindasitiri vagadziri, kuti chakuvhuvhu vagadziri, kuti bhodhi goko mafekitari, isu chete tinoda pfungwa dzenyu kana vanodhirowa wako akubatsire kwazvo pachako akagadzirirwa Electric Surfboard kana muviri bhodhi rako.
Subsidized Sample Price
Tiri vanosvibisa. Tinoda kuti mvura mitambo kuva uye dzakakurumbira zvikuru. Tinoda vanhu vakawanda vave mukana kunakirwa zvokunakidzwa edu mvura mai hunhu kupa. Tinotenda saka muri. Tinotenda kuti zvose hope huru vane anozvininipisa kutanga, saka tinoda kuti chipingamupinyi kuti sezvo yakaderera sezvinobvira, nokuti vose vanosvibisa vanoda kuva mumvura iyi zvikuru mitambo mukusimudzira kutanga. Harungashandurwi kune zvetsika Pricing zano, tiri chaizvo subsiding redu mharidzo mutengo kuti mharidzo kuti zvikuru zvakachipa zvokuti zvingava nyore kuti vawane chimwe uye edza vachiidururira mugamuchirwe. The subsidized mharidzo mutengo ndekwokuda chete zvebhizimisi vatengi vari kuronga kuva dealers edu / Distributors. Saka kuraira pfupi kambani inogona chinodiwa kuti kodzero yedu subsidized mharidzo mutengo. Personal vatengi aigona kutenga panguva retailing mutengo.
Surfboard With Motor , Motor Surfboard, Motorized Surfboard, Jet Electric Body Board Motor, Water Board With The Motor, Motor For Esurfing,